Nehemiya 13 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
13 Pazuva iroro bhuku+ raMosesi rakaverengwa+ vanhu vachinzwa; uye makawanikwa makanyorwa kuti muAmoni+ nomuMoabhi+ havafaniri kupinda muungano yaMwari wechokwadi nokusingagumi,+ 2 nokuti ivo havana kugamuchira vanakomana vaIsraeri nezvokudya+ nemvura,+ asi vakabhadhara Bharami+ kuti avatuke.+ Asi Mwari wedu akachinja kutuka kwacho kuva kukomborera.+ 3 Naizvozvo, pavakangonzwa mutemo wacho,+ vakatanga kutsaura+ boka rose revamwe vanhu vakanga vakavhengana vachibva kuna Israeri. 4 Zvino izvi zvisati zvaitika, mupristi Eriyashibhi+ aitarisira imba yokudyira+ yeimba yaMwari wedu aiva hama yaTobhiya;+ 5 uye akamuitira imba huru yokudyira,+ pavaigara vachiisa zvinopiwa zvezviyo,+ zvinonhuhwirira zvichena nemidziyo nechegumi chezviyo, waini+ itsva nemafuta,+ zviya zvaifanira kupiwa vaRevhi+ nevaimbi nevachengeti vemasuo, uye mupiro wevapristi. 6 Panguva yose iyi ndakanga ndisiri muJerusarema, nokuti mugore rechimakumi matatu nemaviri+ raAtashasta+ mambo weBhabhironi ndakaenda kwaiva namambo, uye pane imwe nguva gare gare ndakakumbira nguva yokusava pabasa kuna mambo.+ 7 Ndakabva ndasvika kuJerusarema ndikaona zvakaipa zvakanga zvaitirwa Tobhiya+ naEriyashibhi+ nokumugadzirira imba muchivanze cheimba+ yaMwari wechokwadi. 8 Zvino zvakava zvakaipa kwazvo kwandiri.+ Naizvozvo ndakakanda+ midziyo yose yeimba yaTobhiya kunze kweimba yokudyira. 9 Pashure paizvozvo ndakataura shoko, vakachenesa+ dzimba dzokudyira;+ uye ndakadzorera imomo midziyo+ yeimba yaMwari wechokwadi, pamwe chete nechinopiwa chezviyo nezvinonhuhwirira zvichena.+ 10 Zvino ndakaona kuti vaRevhi vakanga vasina kupiwa migove+ yavo, zvokuti vaRevhi nevaimbi vaiita basa vakamhanyira, mumwe nomumwe kumunda wake.+ 11 Ndakatanga kuwanira mhosva+ vatevedzeri vevatongi+ ndikati: “Neiko imba yaMwari wechokwadi yaregeredzwa?”+ Naizvozvo ndakavaunganidza ndikavamisa panzvimbo yavo yavaifanira kumira. 12 Kana ari Judha wose, akaunza chegumi+ chezviyo+ nechewaini itsva+ nechemafuta+ kunzvimbo dzokuchengetera zvinhu.+ 13 Ndakabva ndaita kuti mupristi Sheremiya nomukopi Zadhoki naPedhaya wevaRevhi vatarisire nzvimbo dzaichengeterwa zvinhu; uye Hanani mwanakomana waZakuri mwanakomana waMataniya+ aiva pasi pavo, nokuti vakanzi vakatendeka;+ uye ndivo vaifanira kugovera+ hama dzavo. 14 Haiwa Mwari wangu, ndiyeukei,+ pamusoro peizvi, uye musadzima+ mabasa angu omutsa worudo andakaitira imba+ yaMwari wangu uye kuitarisira kwandakaita. 15 Mumazuva iwayo ndakaona vanhu muJudha vachitsika-tsika zvisviniro zvewaini pasabata+ nokuuya nemirwi yezviyo nokuitakudza+ mbongoro,+ uyewo waini, mazambiringa nemaonde+ nemitoro yemarudzi ose, vachiuya nazvo muJerusarema pazuva resabata;+ uye ndakavanyevera pazuva ravakatengesa zvokudya. 16 Naivo vokuTire+ vaigara muguta uye vaiuya nehove nezvokutengesa zvemarudzi ose+ vachitengesera vanakomana vaJudha nomuJerusarema pasabata. 17 Naizvozvo ndakatanga kuwanira mhosva vanokudzwa+ vaJudha ndikavati: “Chinhu ichi chakaipa chamuri kuita chii, muchitosvibisa zvenyu zuva resabata? 18 Madzitateguru enyu haana kuita saizvozvi,+ zvokuti Mwari wedu akaunza nhamo yose iyi patiri,+ nepaguta rinowo here? Asi imi muri kuwedzera kutsamwirwa kwazvo kwaIsraeri nokusvibisa sabata.”+ 19 Zvino magedhi eJerusarema achangova nomumvuri sabata risati rasvika, ndakabva ndataura shoko, masuo akatanga kuvharwa.+ Ndakataurazve kuti varege kuavhura kutozosvikira sabata rapfuura; uye ndakamisa vamwe vevashandi vangu pamagedhi kuti parege kuva nomutoro ungapinda pazuva resabata.+ 20 Naizvozvo vashambadzi nevatengesi vezvinotengeswa zvemarudzi ose vakarara vari kunze kweJerusarema kamwe uye kechipiri. 21 Ndakabva ndavanyevera+ ndikati kwavari: “Muri kurarirei muri pamberi porusvingo? Kana mukazviitazve, ndichakukuvadzai.”+ Kubvira panguva iyoyo havana kuzouya pasabata. 22 Ndakati vaRevhi+ ngavagare vachizvinatsa+ vachipinda, vachirinda magedhi+ kuti vatsvenese+ zuva resabata. Ndiyeukireiwo+ izvi, haiwa Mwari wangu, uye ndinzwirei tsitsi maererano noukuru hwomutsa wenyu worudo.+ 23 Uyewo, mumazuva iwayo ndakaona vaJudha vakanga vapa madzimai echiAshdhodhi,+ okuvaAmoni nokuvaMoabhi+ pokugara.+ 24 Kana vari vanakomana vavo, hafu yaitaura mutauro wechiAshdhodhi, uye hapana mumwe wavo aigona kutaura chiJudha,+ asi rurimi rwevamwe vanhu. 25 Ndakatanga kuvawanira mhosva, ndikavatuka,+ ndikarova vamwe varume vavo,+ ndikadzura bvudzi ravo, ndikaita kuti vapike naMwari+ ndichiti: “Musapa vanakomana vavo vanasikana venyu, uye musagamuchira chero upi zvake wevanasikana vavo nokuda kwevanakomana venyu kana kuti nokuda kwenyu.+ 26 Soromoni mambo waIsraeri haana kutadza nokuda kwaivava here?+ Pakati pemarudzi mazhinji hakuna kuva namambo akaita saiye;+ uye aidiwa naMwari wake,+ zvokuti Mwari akamuita mambo wevaIsraeri vose. Naiyewo akatadziswa nemadzimai okune dzimwe nyika.+ 27 Zvino chinhu chisina kumbonzwiwa here zvamunoita zvakaipa zvikuru zvose izvi nokusatendeka kuna Mwari wedu nokupa madzimai okune dzimwe nyika pokugara?”+ 28 Mumwe wevanakomana vaJoyadha+ mwanakomana womupristi mukuru Eriyashibhi,+ akanga ari mukuwasha waSanibharati+ muHoroni.+ Naizvozvo ndakamudzinga.+ 29 Vayeukei, haiwa Mwari wangu, nokuda kwokusvibisa+ upristi nesungano+ youpristi neyevaRevhi.+ 30 Ndakavanatsa+ pazvinhu zvose zvokune dzimwe nyika ndikapa vapristi nevaRevhi mabasa, mumwe nomumwe pabasa rake,+ 31 kunyange romugove wehuni+ panguva dzakatarwa uye rezvibereko zvaitanga kuibva. Ndiyeukei,+ haiwa Mwari wangu, nenzira yakanaka.+